कुनैपनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु हुँदैन : गृहमन्त्री खाँड
गृह मन्त्रालयको सुरक्षा निकाय पुग्नुपर्यो । त्यसले गर्दा जनतालाई सरकार छ, सरकार मेरो साथमा छ, दुःख सुखमा साथ दिन्छ भन्ने अनुभूति दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता र सोच हो । त्यसको लागि नै म कार्यरत रहन्छु ।
मंगलवार, श्रावण १२, २०७८ क्यापिटल दैनिक
नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा रहेको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कुराकानी गर्दै उनले सरकार अनि राज्य प्रणालीको सुरुवात नै नागरिकको जीवनरक्षाका लागि भएको र शासन व्यवस्था भित्रको नागरिकको जीवन रक्षा नै आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताए । जुनसुकै कारणले होस् कुनैपनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु हुँदैन भन्ने नै मूल मर्मका साथ काम गर्ने उनले स्पष्ट पारे । गृहमन्त्रालयका थुप्रै कार्यक्षेत्रहरु छन् । त्यसलाई पनि हामीले परिष्कृत गर्दै राम्रो गराउँदै जाने हो । उनले राजनीतिक विचारधाराबाट परिचालित नभई काम, कर्तव्य, भूमिका र योगदानको आधारमा सुरक्षा निकायलाई प्रोत्साहित तथा उत्साहित गरि मनोबल बढाउने भूमिकामा आफू रहने स्पष्ट पारे । प्रस्तुत छ गृहमन्त्री खाँडसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश ।
अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा तपाईले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । आगामी दिनमा आफ्नो चुनौती के देख्नुभएको छ ?
म एउटा नेपाली कांग्रेसको सिपाई हुँ । मुलुकको एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ । त्यसकारण मैले गृह मन्त्रालयलाई एउटा नागरिकको आँखाबाट हेर्छु । जनप्रतिनिधिको रुपमा जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा मैले मेहनत गर्छु । त्यसकारण मैले के अनुभूत गरेको छु भने यो मन्त्रालय आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारको बारेमा पहिलो अनुभुति दिने नै यो मन्त्रालय हो । सरकार छ भनेर । मानौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउन जानुपर्यो । त्यहाँ गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ । त्यसैगरी कहिँ केही प्रकोप भयो, त्यहाँ गृह मन्त्रालयको सुरक्षा निकाय पुग्नुपर्यो । त्यसले गर्दा जनतालाई सरकार छ, सरकार मेरो साथमा छ, दुःख सुखमा साथ दिन्छ भन्ने अनुभूति दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता र सोच हो । त्यसको लागि नै म कार्यरत रहन्छु ।
तपाईसँग रक्षामन्त्रालय चलाएको अनुभव छ, सुरक्षाको मनोबल बुझ्नुहुन्छ होला, कतिपय मानिसहरु राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल सबैभन्दा कमजोर भएको छ । तपाईको भूमिका राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउनमा वा मनोबल बढाउनमा केन्द्रित हुन्छ ?
गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रसेवकहरु होस् या नेपाल सरकारका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी मित्रहरु हुनुहोस्, या शिक्षक, प्राध्यापक सबै हुनुहोस्, या सुरक्षा निकायमा कार्यरत अधिकृत र जवानहरु होस् सबैले मुलुकका निर्माणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहनु भएको छ । तर हाम्रो मन्त्रालय मातहत भएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकहरुले आवश्यक परेमा चौविसै घण्टा खट्नुपर्छ । ज्यानको जोखिम राखेर गर्नुपर्छ । अहिले कोरोना महामारी छ । कहीँ बाढी छ । पानीमा नागरिक डुबिरहेको छ । बाढीले बगाइरहेको छ । पुलिसले त हाम्फालेर रेस्क्यु गर्नुपर्यो नि । उसले कोरोना महामारी छ भनेर मास्क खोज्न थाल्दैन नि । आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर पनि नागरिकको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकलाई हामीले सम्मान गर्नैपर्दछ । उहाँहरुलाई पर्याप्त साधन, स्रोत दिन सकेका छैनौँ । पर्याप्त सुविधा दिन सकेका छैनौँ । तैपनि ति राष्ट्रसेवक र सुरक्षाकर्मीहरुको यो देश हाम्रो हो, हामी यो देशको नागरिक हौँ र हाम्रा परिवारका सदस्यहरु पनि नागरिक हुन् । त्यसकारणले परिवारका सदस्यप्रतिको मेरो जुन कर्तव्यबोध छ, जुन दायित्व छ देशका नागरिक र देशप्रति पनि मेरो दायित्व बोध छ भनेर त्यो दायित्व बोध भएको कारणले उहाँहरु काम गरिरहनुभएको छ । यस्तो बेलामा हामीले उहाँहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, उत्साहित गर्ने र उहाँहरुको मनोबल बढाउने नै हो ।
यसमा मिडियाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । कुनै घटना घट्यो । नेपाल प्रहरीले त तत्काल त्यहाँ अनुसन्धान थाल्छ । उसको त त्यो दायित्व र कर्तव्यभित्रै पर्छ । तर त्यसको तथ्य छानविन गरेर बाहिर ल्याउन केही समय पनि लाग्छ । फेरी छानविन भईरहेको बेलामा सबै कुराहरु छानविनका रिपोर्टहरु बाहिर ल्याउनुपनि उचित नहोला । किनभने कतिपय कुराहरु छानविन भइराखेको हुन्छ । पत्ता लगाउन खोजिरहेको हुन्छ । जम्मै कुरा भन्ने हो भने त सम्बन्धित अपराधी भागिरहेको पनि हुन्छ । त्यसकारणले त्यसको गोपनियता राखेको पनि होला । तर जनस्तरबाट आवाज उठ्छ, हामीले पनि उठाइन्छ । पुलिसले छानविन गर्नै सकेन । पुलिसले अपराधीलाई पक्रनै सकेन, जाँचबुझ नै गर्न सकेन विभिन्न स्तरबाट त्यो कुरा उठ्दाखेरी छानविन समिती बनाइदिऊँ भनेर मन्त्रालयले छानविन समिति बनाईदिन्छ । छानविन बनाउँदाखेरी पनि प्रहरीले त्यसमा अनुसन्धान त गर्नैपर्छ । त्यसकारणले यसमा कतिपय यस्ता मुद्दाहरु होलान्, कतिपय यस्ता घटना होलान् जहाँ तथ्यगत छानविन गर्नुपर्ला । काहीँ संसदीय छानविन समिति चाहिएला । कहीँ न्यायिक छानविन समिति चाहिएला । कहिँ प्रशासनिक छानविन समिति चाहिएला । तर कुनै घटना भयो र त्यो घटना बाहिर आयो, जनमानसमा एउटा आक्रोश जाग्यो भने त्यो घटनाको तथ्य पत्ता लगाउने भन्दापनि जनमानसमा उठेको आक्रोसलाई शान्त पार्नका लागि छानविन समिति बनाईदिएको घटनाहरु पनि होलान् । त्यसकारणले कतिखेर साच्चै छानविन समिति बनाउने, कतिखेर पुुलिसमाथि पुरै भरोसा गरेर पुलिसलाई हामीले साथ दिने, त्यसका लागि बरु आवश्यक सामग्री, उपकरणहरु दिने कि त्यसमा तपाईहरुले पनि मद्दत गर्नुस् म पनि लागौंला ।
घटना भयो । त्यतिखेर प्रश्न उठाईयो । जिज्ञासा उठाईयो । जानकारी सरकारसँग मागियो । किनकी आम नागरिकसँग, जनप्रतिनिधिसँग घटनाको बारेमा केही तथ्यहरु थाहा हुन्छ । केही कुरा देखिन्छ, सुनिन्छ तर सत्य, यथार्थ थाहा नहुनसक्छ । त्यसकारणले यो घटनाको बारेमा यथार्थ कुरा जनता समक्ष ल्याईयोस् भनेर जनप्रतिनिधिले माग गर्नु त्यो सही कुरा हो । तर सरकारले, सरकारको प्रतिनिधि या मन्त्रीले त्यसमा सत्यतथ्यको जानकारी दिने हो । विगतमा हामीले जुन ढंगले प्रश्न उठाएका छौँ ति प्रश्नहरुको जवाफ कतिपय सवालमा आफैँ दिने ठाउँमा पनि पुगिन्छ । त्यसकारणले खास गरेर हाम्रो यो बहुदलीय शासन व्यवस्था त्यो पनि बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकर कहिले प्रतिपक्षमा पुग्छ कहिले प्रतिपक्ष सरकारमा पुग्छ । त्यसैले यसलाई सहजै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । र विगतको कतिपय सन्दर्भहरुलाई हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्दछ । र त्यो अध्ययनबाट हामीले पाठ लिएर आउने दिनमा अझै राम्रो पनि गर्न सक्नुपर्दछ ।
पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा हो । किनकी यो राज्यप्रणालीको दुनियाँमा प्रार्दुभाव किन भयो, सरकार किन बन्यो, समुदायमा हामी किन बस्यौँ भन्दा हाम्रो जीवन रक्षाको लागि हो । मान्छेले आफ्नो जीवनरक्षाको लागि मान्छे मान्छेसँग मिलेर समुदाय बनायो राज्य प्रणालीमा सुरुवात गर्यो । जुनसुकै सरकारले पनि मेरो शासन व्यवस्था भित्रको नागरिकको जीवन रक्षा मेरो पहिलो दायित्व हो, कुनैपनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो मुल प्राथमिकता हो । त्यसकारले विभिन्न घटना परिघटनाबाट मान्छेको ज्यान जाने कुरा होस्, चाहे यो कोरोना महामारीबाट मान्छेको ज्यान जाने कुरा होस्, संक्रमणको कारणले, जुनखालको हाम्रो अर्थ व्यवस्था पनि थिलथिलो भएको छ । यसैलाई नै हामिले प्राथमिकताको साथ अगाडि लाने हो । गृहमन्त्रालयका थुप्रै कार्यक्षेत्रहरु छन् । त्यसलाई पनि हामीले परिष्कृत गर्दै राम्रो गराउँदै जाने हो ।
तपाईँले पद बहाली गर्नु लगत्तै विभिन्न सुरक्षा अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । के कुराकानी भएको थियो ?
उहाँहरुले यो मन्त्रालयको सांगठनिक ढाँचा, यसको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउनुभयो । मैले आफ्नो अनुभवहरु र उहाँले जानकारी गराएको कुराहरुमा आफ्नो धारणाहरु राखें र सबैलाई धन्यवाद दिएँ । त्यसपछि यो मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकायहरुसँग आफ्नो–आफ्नो निकायमै छलफल हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न तहगत विभागहरु छन् । उनीहरुसँग पनि छलफल हुन्छ । अहिले खाली मैले पदबहाली गरें । सचिवजीले यहाँको स्थितिको बारेमा र यसको सांगठनिक ढाँचाको बारेमा, काम, कर्तव्य, अधिकार र भुमिकाको बारेमा, केही समस्या र चुनौतीहरुको बारेमा ब्रिफ गर्नुभयो । मैले एउटा नागरिकको चस्मा लगाएको जुन अवस्थामा म छु, मैले एउटा नागरिकले गृहको बारेमा, नागरिकले सुरक्षाको बारेमा, सुरक्षाकर्मीको बारेमा जे धारणा राख्छ, त्यो मैले राखें । हामी सबै मिलौँ । मुलभूत रुपमा नेपालको जुन शासन प्रणाली छ यो शासन प्रणालीमा नेपाली जनता नै मालिक हुन् । र हामीहरु राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधिहरुपनि हामी सेवक हौँ । तपाईँहरु राष्ट्रिय सेवक पनि जनताको सेवक हो । त्यसकारणले हामी एक आपसमा हातेमालो गरौँ । जनतालाई मालिक बनाउने, मालिकको अनुभुति दिने, संविधानमा, विधिमा, कानुनमा मालिक त बनाईयो । तर मनमा, अनुभुतिमा जनतालाई साँच्चै सरकार सेवक भएछ, जनप्रतिनिधि सेवक भएछन्, हामी मालिक भएछौँ भन्ने अनुभुति दिन सकौँ । त्यसको लागि सामुहिक प्रयत्न गरौँ । म तपाईहरुसँग मित्रवत् व्यवहार गर्छु । म तपाईहरुको साथीको रुपमा आएको छु भने मैले ।
सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापनाको कार्य आक्रमक ढंगले अघि बढिरहेको छ । यसमा तपाईको प्राथमिकता के रहन्छ ? प्रहरीको समायोजन, सरुवा बढुवाको बारेमा के छ ?
बिओपीको बारेमा, नेपालको भुमिको रक्षा गर्ने काम हाम्रो हो । सरकारको हो । नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो । बिओपीले राष्ट्रिय भूमिको रक्षा र नागरिकको रक्षामा मद्दत पुर्याउँछ भन्ने नै हामी सबैको विश्वास हो र त्यसले निरन्तरता पाउँछ । जहाँसम्म सरुवा, बढुवाको कुरा गर्नुभयो । त्यसमा कार्यक्षमताकै आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो । एउटा सामान्य नागरिकले पनि के भन्छ भने यसले राम्रो जनताको मन जित्ने काम गरेको छ । जनतालाई सम्मानित गर्दै आफ्ना कामहरु सम्पन्न गरेको छ भने कतिपय जिल्लामा सिडियोलाई, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई, पुलिस प्रशासकलाई अभिनन्दन गरेर खाँदा र मालाले ढाकेर पठाईदिएका पनि छन् । सम्मान गरेर बिदाई हुने बेलामा । कतिपय ठाउँमा साटाक सुटुक हिड्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो सन्तुलन मिलाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले यसमा अध्ययन गर्नै बाँकी छ । भर्खर आएको छु । सबैको सल्लाह मलाई चाहिन्छ, कसरी मैले जाने । बाहिर जनमानसमा के छ भन्दाखेरी बढुवामा व्याचका व्याच जम्प गराउनु राम्रो होईन् भन्ने छ जनतामा । एकदमै विशेष दख्खल हासिल गरेको, कुनै विज्ञता हासिल गरेको, कुनै त्यस्ता ठूला घटनाहरुलाई बढो गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरेर ठूलो स्याबासी लायक काम गरेकाहरुलाई काम गर्नेले सम्मान पाउँछ, काम गर्नेले स्थान पाउँछ भनेर इम्प्रेसन दिन गर्ने कुरा अलग हो । नभएदेखि व्याचका व्याच मिचेर गर्नु राम्रो होईन भन्ने आम जनताको भनाई छ । त्यसप्रति म गम्भीर छु ।
कोभिड महामारीमा सुरक्षा निकाय र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु खटिनुपरेको छ । जनताको सुरक्षाका लागि पनि सरकारको प्रतिवद्धता छ । सबैलाई भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो लगाउने । सबैको उपचार गर्ने । सबै संक्रमितहरुको जीवन बचाउनका लागि सरकार दत्तचित्त छ । त्यसको साथसाथै गृह मन्त्रालय र हाम्रो सुरक्षा निकायहरुले फ्रन्टलाइनमा बस्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरुको पनि उनीहरुको पनि जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको हो । मन्त्रालयको हो । विभागको हो । त्यतापट्टिपनि हामी गम्भिर छौँ । उहाँहरु संक्रमित नहुनुहोस् । त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने । आवश्यक प्रशिक्षण दिने । आवश्यक भ्याक्सिनहरु दिने । संक्रमित भइहाल्यो भने ति सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकको पनि जीवन रक्षा गर्ने, तीनको पनि उपचार गर्ने दायित्व हाम्रो हो भनेका छौँ । त्यसको लागि मैले उहाँहरुसँग ब्रिफिङमा पनि भनेको छु कि राम्रो कामको लागि सराहना गर्दछु र तपाईँहरुको जीवन रक्षाको लागि सरकार साथमा छ । मन्त्रालय तपाईँहरुको साथमा छ । उहाँहरुलाई उत्साहित र प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छौ ।
प्रकाशित मिति: मंगलवार, श्रावण १२, २०७८, ०९:२५:४२